ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အစိုးရလုပ်ရပ်သည် တိုင်းရင်းသားများ၏ ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေသည်ဟု UNA ခေါင်းဆောင်များ ပြော
လာပြန်ပီ မင်းတို့က တဖွဲ့ နောက်ထပ် ဘယ်လောက်ထပ်ဖွဲ့ကြ ဦးမလဲ များလေလေ ရှုပ်လေလေ
tq UNA..TRY TO GET our TARGET..stand firm...drag out their lie veil to see and know .tell to present changed dress gorverment to be honest and to do rightthings..if not ...
အတွေးအမြင်တွေချည်းပဲ ခင်ဗျားရဲ့အဆင့်ကိုသိအောင်ပြောပြမှရမယ် တကယ်တမ်းတော့
ခင်ဗျားဟာဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့အပုပ်ကောင်အသေကောင်ပဲ ထားရင်လဲနံ ပစ်ရင်လဲနံဆိုတာမျိုးပေါ့
ဆင်းကဒ်တွေရောင်းဖို.ပြင်နေတယ် ၊ လဘ်စားလို.ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်းဖြုတ်လိုက်ပြီ၊
ပါ ၊အဆင်.ဆင်. ပါးပါးလှီးတာ ရပ်ပါတော. ၊ မဟုတ်ရင်
ရောင်းရငွေ ၊ ဖုံးပြောခ ၇ငွေ(ရ/သုံးစာ၇င်း)ကိုကော်မတီဖွဲ.
မယ်၊Co. တွေ အ၇င်းကြေတာကြာနေပါပြီ ။